Yurub: Qaarada uu Covid-19 ku laayey Soomaalida ugu badan
Wadarta guud ee xanuunkaan uu ku galaaftay qaaradan ayaa ka badan 20-kun oo ruux.
LONDON, UK – Iyaddoo dunida ay aad ugu dedaaleyso ciribtirka colka qarsoon ee Coronavirus, kaasoo dadka u laynaya si safmar ah hadii aysan muujin feejignaan dheeraad ah, Soomaalida ayaa waxay ku jiraan umadda uu aafeeyay.
Qaaradda Yurub waa meesha uu dhimashada ugu badan ka geystay, taas waxay dhalisay su'aalo ka doodistooda ay waqti badan qaadaneyso.
Dalalka kala ah; Sweden iyo Ingiriiska ayaa hogaaminaya wadamada uu si ba'an ugu gumaadey Soomaalida, wallow ay jiraan dalal kale.
Sidda ay muujineyso xog-uruurintii ugu dambeysay, kaliya waddanka Sweden waxay geerida ka badan 15-ruux oo isugu jira rag iyo dumar.
Yuusuf Tooxow, oo ka tirsan baarlamaanka Sweden lagana soo doorto magaalada Totobori, ayaa sheegay in ay jiraan tirro kale oo isbitaalada u yaala.
Wallow caasimadda Stockholm ay tahay meesha ay geerida ugu badan ka dhacday, degaanada kale waxaa ka jira kiisas kale.
Mas'uuliyiinta Jaaliyadda Soomaalida ee Ingiriiska ayaa dhankooda xaqiijiyey dhimashadda ku dhowaad tobban oo u badan dad da' ahaa.
Cabdiqaadir Maxamed Biriq, ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliyeed isla markaana ahaa falanqeeye arrimaha kubadda cagta ah, ayaa kamid ah dadka magacyaddooda la helay ee u geeriyooday caabuqaas.
Nuur Xasan Xuseen [Nuur Cadde], ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa kamid ah shaqsiyaadka isbitaalada UK u jiifa fayruskaas.
Norway ayaa Jimcadii xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah uu u geeriyooday fayruskaas kasoo bilowday bartamaha Shiinaha.
Marka laga reebo Masar oo laga soo wariyey hal qof oo Soomaali ah kaasoo ka yimid Mareyanka, qaaradaha illaa iyo haatan lagama soo warin wax dhimasho ah.
Khuburada caafimaadka ayaa rumeysan in sababta badisay dhimashada Soomaalida ay tahay in aysan u hogaan-samin amarada dowladaha wadamada ay joogaan oo ay kamid tahay kala fogaanta iyo joojinta socodka.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay mar sii horeysay ku waanisay muwaadiniinteeda ku nool wadamada caalamka in ay raacaan talooyinka caafimaad ee loo jeediyo iyo go'aanada lasoo saaro.
Guud ahaan caalamka, xanuunka Covid—19 ayaa dilay in ka badan 30-kun oo qof, sidda ku xusan xogtii ugu dambeeyay, oo daaha ka rogay in kiisaska ay ka badan yihiin lix boqol oo kun, wallow ay hooseyso dadka ka bogsanaya.
Shan cashar oo caalamka uu ka baratay safmarkeenka Coronavirus
Caalamka 02.05.2020. 16:00
Soomaaliya oo hogaamineysa tirada geerida Covid-19 ee bariga Afrika
Afrika 27.04.2020. 16:30
Geelle oo u hanjabay dadka xili tirada kiisaska Covid-19 ay dhaafeen 800
Afrika 21.04.2020. 07:00
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay 32 kiis cusub oo ah Covid-19
Soomaliya 13.04.2020. 21:45
Covid-19: Cabasho laga muujiyey hanaanka karantiilka Kenya
Afrika 05.04.2020. 18:30
Somaliland oo xoojisay talaabooyinka ay kaga hortageyso Covid-19
Somaliland 29.03.2020. 15:31